မြန်မာ့စပါးအုံး အောင်လအန်ဆန် ဟာ ပြိုင်ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် မြူတ မှုန်စာလောက်တောင်အပြစ်တင်ချက်စိတ်မရှိဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ မောင် မောင် အေး – XB Media Myanmar
အစီအစဉ်တင်ဆက်သူလဲဖြစ် ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလဲ တတ်စွမ်းသမျှ လုပ်ကိုင်နေသူလဲဖြစ် တဲ့ မောင်မောင်အေးလဲ မြန်မာ့ကိုယ်စားပြု MMA သိုင်းပေါင်းစုံဖိုက်တာ အောင်လအန်ဆန်းရဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်.။ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့အချိန် သတင်း ကျွတ်ပွဲတွေလဲ မလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်သားတွေ ပွဲငတ်နေတဲ့ အချိန်မှာOne Championship က ကျင်းပတဲ့ MMA သိုင်းပေါင်းစုံပွဲမှာ အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ ခါးပတ်ကာ ကွယ် ပွဲ က မောင်မောင်အေးအပါအဝင် မြန်မာပြည်သားတွေအတွက် အားပေးစရာပွဲကြီး ဖြစ် ခဲ့ပါတယ်…
ထိုပွဲမှာ မြန်မာ့စပါးအုံးကြီး ရှုံးသွားပေမဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေကအပြစ်မတင်ပဲ ပို၍ချစ်နေ အား ပေးနေကြောင်း ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ သက်သေကြတဲ့အထဲ မောင်မောင်အေးတစ်ယောက်လဲ အပါ အဝင်ပါ။တရားနည်းလမ်းကျကျ ပြိုင်တဲ့ပွဲမှာ ရှုံးသွားပေမဲ့ အရင်ကထက် ပိုပြီး ချစ်လာ အား ပေးလာတာကိုစာနဲ့တကွရေးသားကာဖော်ပြခဲ့တာပါ။.
မောင်မောင်အေးကသူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ “တရားသဖြင့် စည်းကမ်းတကျပြိုင် တဲ့ ပွဲမှာ….ကိုယ့်လူနိုင်ရင် ပျော်တယ်…ရှုံးလည်း ဝမ်းနည်းရတာကလွဲရင် အပြစ်တင်စရာ တမှုန်စာ လေးတောင်မရှိ….ပိုလို့တောင်ချစ်လာသေး….နိုင်ပွဲတွေယူပေးခဲ့သမျှဆိုတာထက် နိုင်ငံတကာ ပွဲတွေမှာ မြန်မာအလံကိုခြုံရင်း အမဲလိုက်သီချင်းနဲ့ ပွဲပေါင်းများစွာ ရင်ကော့ထွက်လာပေးနေ ခဲ့တာနဲ့တင် တဘဝစာ ချစ်သွားမှာ…..တနိုင်ငံလုံးရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရွှေခါးပတ်ကြီးက
ခင်ဗျားရဲ့ခါးမှာ တသက်လုံး မချွတ်တမ်းပတ်ထားနေရမှာအမြဲသိနေပေးပါ ….ကျေးဇူးတင်ပါ တယ် Burmese Python ကြီးရေ.. ” ဆိုတဲ့စာသားတွေနဲ့အတူ အောင်လအန်ဆန်ကို ပို၍ချစ် လာကြောင်း သက်သေပြလာပါတယ်။ Myanmar Cele ပရိသတ်ကြီးလဲ အောင်လအန် ဆန်း ကြီးကို ပို၍ချစ်လာကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။သီတင်းကျွတ်အခါသမယမှာ ကုသိုလ်ထူး တွေ ပို၍ပို၍ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကနေ်းမာကြပါစေနော်…။
Source: Mg Mg Aye
အစီအစဥ္တင္ဆက္သူလဲျဖစ္ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြကိုလဲ တတ္စြမ္းသမွ် လုပ္ကိုင္ေနသူ လဲျ ဖစ္ တဲ့ ေမာင္ေမာင္ေအးလဲ ျမန္မာ့ကိုယ္စားျပဳ MMA သိုင္းေပါင္းစုံဖိုက္တာေအာင္လအန္ဆန္းရဲ႕ ပရိသတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္.။ကိုဗစ္ေရာဂါေၾကာင့္ အိမ္တြ င္းေ အာင္းေနရတဲ့အခ်ိန္ သတင္း ကြၽတ္ပြဲေတြလဲ မလုပ္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပ ည္သားေတြ ပြဲငတ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာOne Championship က က်င္းပတဲ့ MMA သိုင္းေ ပါင္းစုံပြဲမွာ ေအာင္လအန္ဆန္ရဲ႕ ခါးပတ္ကာ ကြယ္ ပြဲ က ေမာင္ေမာင္ေအးအပါအဝင္ ျမန္မာျပည္သားေတြအတြက္ အားေပးစရာပြဲႀကီး ျဖစ္ ခဲ့ပါတယ္…
ထိုပြဲမွာ ျမန္မာ့စပါးအုံးႀကီး ရႈံးသြားေပမဲ့ ျမန္မာျပည္သားေတြကအျပစ္မတင္ပဲ ပို၍ခ် စ္ေ န အား ေပးေနေၾကာင္း ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သက္ေသၾကတဲ့အထဲ ေမာ င္ေမာင္ေအးတစ္ေယာက္လဲ အပါ အဝင္ပါ။တရားနည္းလမ္းက်က် ၿပိဳင္တဲ့ပြဲမွာ ရႈံး သြားေပမဲ့ အရင္ကထက္ ပိုၿပီး ခ်စ္လာ အား ေပးလာတာကိုစာနဲ႔တကြေ ရးသား ကာေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။.
ေမာင္ေမာင္ေအးကသူ႔ရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန “တရားသျဖင့္ စည္း ကမ္းတက်ၿပိဳင္ တဲ့ ပြဲမွာ….ကိုယ့္လူႏိုင္ရင္ ေပ်ာ္တယ္…ရႈံးလည္း ဝမ္းနည္းရ တာကလြဲရင္ အျပစ္တင္စရာ တမႈန္စာ ေလးေတာင္မရွိ….ပိုလို႔ေတာင္ခ်စ္ လာေသး….ႏိုင္ ပြဲေတြယူေပးခဲ့သမွ်ဆိုတာထက္ ႏိုင္ငံတကာ ပြဲေတြမွာ ျမန္မာအလံကိုၿခဳံရင္း အမဲလို က္သီခ်င္းနဲ႔ ပြဲေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ေကာ့ထြက္လာေပးေန ခဲ့တာနဲ႔တင္ တဘဝစာ ခ်စ္သြား မွာ…..တႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေ႐ႊခါးပတ္ႀကီးက
ခင္ဗ်ားရဲ႕ခါးမွာ တသက္လုံး မခြၽတ္တမ္းပတ္ထားေနရမွာအၿမဲသိေနေပးပါ ….ေက်းဇူးတင္ပါ တယ္ Burmese Python ႀကီးေရ.. ” ဆိုတဲ့စာသားေတြနဲ႔အတူ ေအာင္လအန္ဆန္ကို ပို၍ ခ်စ္ လာေၾကာင္း သက္ေသျပလာပါတယ္။ Myanmar Cele ပရိသတ္ႀကီးလဲ ေအာင္လအန္ ဆန္း ႀကီးကို ပို၍ခ်စ္လာၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။သီတင္း ကြၽ တ္အခါသမယမွာ ကုသိုလ္ထူး ေတြ ပို၍ပို၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ကေန္းမာ ၾ ကပါေစေနာ္…။